फाइनान्सर, व्यापारी तथा डक्टर सहित एक सय जना पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको यि मोडलको खुलासा – SawalNepal
फाइनान्सर, व्यापारी तथा डक्टर सहित एक सय जना पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको यि मोडलको खुलासा
By सवालनेपाल	 प्रकाशित समय २०७४, २३ पुष आईतवार ०८:४४
बेलायतकी एक पूर्व–मोडलले एक सय विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरेकी छिन् । पेशाले ‘फाइनान्सियल कन्सलटेन्ट’ रहेकी ‘ग्वेनेथ ली’ले धेरै श्रीमानलाई सन्तुष्ट बनाएर वैवाहिक जीवन बचाइदिएको बताएकी छिन् । महिलाले यतिका विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राखेपछि पनि कुनै पछुतो नलागेको बताएकी छिन् ।
यी धनाढ्य महिलाले जो–जो परुषसँग सम्बन्ध बनाइन्, तीमध्ये लगभग आधा पुरुषकी पत्निहरुलाई श्रीमानले धोका दिइरहेको थाहा पाउथे । तर, उनीहरुको यौन जीवन राम्रो नभएकाले श्रीमानको पर–स्त्रिसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिदिन्थे । महिलाले भनिन्, ‘म इमानदारीका साथ मान्छु, मेरो कारणले धेरै विवाहित जोडीको सम्बन्ध बिग्रिनबाट बाँचेको छ ।’
ग्वेनेथले भनिन्, ‘धेरै महिलाका लागि दैनिक तालिकाबाट यौन शब्द हराएर जान्छ । त्यस्ता महिला साथी र बच्चाहरुसँग खुशी रहन्छिन् । तर, धेरै पुरुष सेक्सका लागि बेचैन रहन्छन् । उनीहरु आफ्नी पत्नीलाई छोड्न चाहादैनन्, तर यौन चाहानालाई पनि मेटाउन चाहान्छन् ।’ महिलाका अनुसार, उनी पुरुष साथीबाट मात्रै रमाइलो चाहान्छिन् ।
ग्वेनेथले भनिन, ‘कहिले काही पुरुषलाई सेक्स मन लागिरहेको हुँदैन, यस्तो अवस्थामा महिलाले नयाँ सम्बन्धबाट आफूलाई खुशी राख्छिन् र उनका श्रीमान इमान्दार रहिरहन्छन्, यो पनि सही छ ।’ महिलाले धेरैजसो विवाहित पुरुष ‘इलिसिट एन्काउन्टर डटकम’को माध्यमबाट भेटको बताइन् । यो बेलायतको एक प्रमुख डेटिङ वेबसाइट हो । १० बर्षअघि महिलाको श्रीमान रोबर्टको मृत्यु भएको थियो, त्यसपछि नै उनले यस वेबसाइटमा अकाउन्ट बनाएकी थिइन् । महिलाको प्रेमीमा फाइनान्सर, व्यापारी तथा डक्टर रहेको बताइन् ।
पुरुषले जन्माए स्वस्थ बच्चा
को-को बन्दैछन् प्रदेश प्रमुख ? यस्तो छ सकारले तयारी गरेको नाम
समुद्री किनारमा मोडलले खिचाइन आगो लगाउने तस्बिर
मान्छेको उमेर जति बढ्दै जान्छ, त्यति सेक्स पावर घट्दै जान्छ- ज्योति
गरिबीको पीडा ! श्रीमान बेपत्ता भएकी सुबितामाया मृत्यु पर्खेर…
२०७५, ५ आश्विन शुक्रबार १६:२५